प्रधानमन्त्रीको धम्कीले कोहि डराउँदैन
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिने गरेका धम्कीबाट कोही पनि नडराउने बताएका छन्। विवेक हुने मानिस प्रधानमन्त्री ओलीको धम्कीबाट नडराउने उनको भनाइ छ। सर्लाही पुगेका थापाले आज पार्टीले गरेको कार्यक्रममा भने, ‘कोही मानिसको विवेक छैन? प्रधानमन्त्रीजी धम्क्याउन छोडिदिनुस्।
तपाईंको धम्कीबाट तपाईंकै पार्टीका ‘जोकर’हरू डराउँलान् तर हामी डराउँदैनौं। विवेक भएको मानिस डराउँदैन।’ उनले प्रधानमन्त्री ओलीको धम्कीले अदालत पनि नडराउने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई जागिरे भन्दै धम्की दिएकोप्रति थापाले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले भन्दा प्रत्येक दिन प्रधानमन्त्री ओलीले धम्की दिने गरेको बताएका छन्।
मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्माले शाही आयोग खारेज गरिदिएको उनले बताए। ‘यी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू त्यसबेला जागिरे नभएका भए आज ज्ञानेन्द्रले बनाएका शाही कोठरीमा थुनेर बस्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यसबेला थपडी अहिले धम्की?’ उनले प्रश्न गरे।
प्रदेश सांसद दिपक मनाङे वामदेवको पक्षमा
यहि माघमा बिहे गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राई
नेपालको भु–राजनितीको सधै प्रभाव
मेरै भविष्य थाहा छैन,विमानस्थलको कसरी भन्नू?
कोभिड खोपको ‘साईड इफेक्ट’का कारण नर्वेका डाक्टरसहित १३ नागरिकको ज्यान गयो
चीनमाथी प्रतिबन्ध लगाए ट्रम्पले
औषधि व्यवस्था विभागले”कोभिसिल्ड” खोपलाई अनुमति दियो
पोर्चुगलमा ३० जनवरीसम्मका लागि संकटकाल थपियो 119 views
प्रचण्ड पत्नी सीतालाई नेपाल ल्याईयो 30 views
आज २०७७ माघ ०२ गते शुक्रवारकाे राशिफल 23 views
यहि माघमा बिहे गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राई 22 views
गजल – माधव दाहाल ‘निश्चल’ 17 views